Sony Xperia 1 II ကို မျှော်လင့်မထားတဲ့ စျေးနှုန်းနဲ့ Pre-order မှာယူနိုင်ပြီ
2020 ပထမ သုံးလပတ် (ဇန္နဝါရီ ၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊ မတ်) နဲ့ ဧပြီလအတွက် Financial Report ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရ Sony Mobile ဟာ ၂ နှစ်တာ ကာလအတွင်း အဆိုးရွားဆုံး စံချိန်ချိုးထားပါတယ်။
စာဖတ်သူတွေ သိထားတဲ့အတိုင်း တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် အရောင်းအေးနေတဲ့ Sony ဟာ ဒီကနှစ် ၄ လ အတွင်းမှာ Xperia ဖုန်းအလုံးရေ ၄ သိန်းခန့်သာ ရောင်းချရ သေးတာပါ။
ဖြစ်ချင်တော့ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ မွေနေတဲ့အချိန် သွားဖြစ်နေတော့ နဂိုကတည်းက အေးတိအေးစက် နိုင်နေတဲ့ နှလုံးသား အကျည်းတန် ရပြီလေး၊ နောက်တာပါ။
ဒိအတွက် Sony အနေနဲ့လည်း မျှော်လင့်ချက် ထားပုံရပြီး 2020 CES ပွဲမှာတုန်းက မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Xperia 1 II ၊ 10 II ဖုန်းတွေနဲ့ တခရီးဆက်ချင်ဟန် ရှိပါတယ်။
Xperia 1 II ဟာ 2020 Flagship ဖုန်းတွေနဲ့ ကွဲထွက်နေသလို စာဖတ်သူတွေ မြင်ဖူးနေကျ 21:9 Aspect Ratio နဲ့ ထွက်ရှိလာမှာပါ။ သာမန်ဖုန်းတွေထက် ခပ်ရှည်ရှည် (နိုင်ငံတကာမှာတော့ Tall ဖြစ်တယ်ပေါ့)
ဒီဇိုင်း ၊ Display က Iconic ဖြစ်တယ်လို့ ခံယူထားပုံရပြီး လေးထောင့်ကျကျ ပုံစံနဲ့ တမျိုးတဖုံ ကြည့်ကောင်းပါတယ်။
သို့ပေမယ့် 1 II အားသာချက်က 4K Resolution ပါဝင်တဲ့ Display တစ်ခုထဲ မဟုတ်သလို Galaxy S20 Series ၊ OPPO Find X2 Pro နဲ့ HUAWEI P40 Series တွေမှာလို Megapixel (MP) မြင့် Sensors တွေ သုံးမထားတဲ့အချက်ပါ။
Trinity of 12MP Sensors ၃ မျိုးကိုပဲ အသုံးပြုထားပြီး ထူးခြားချက်နဲ့ Function ပိုင်း အားသာချက်တချို့ ပြောရရင် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး 20fps Burst Mode ပါဝင်ပါတယ်။ ဒုတိယ အနေနဲ့က AF/AE မှာ ၁ စက္ကန့်ကို အကြိမ်ရေ ၆၀ နှုန်းနဲ့ တွက်ချက်ပေးနိုင်တယ်။
ဒါပြီးသွားရင် Eye-tracking Focus က တိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ပါ သုံးလာနိုင်သလို Camera Autofocus ဧရိယာက 70% လောက် ပိုကြီးလာတဲ့ အချက်တွေပါ။
ဒီလုပ်ဆောင်ချက်တွေအတွက် Photography Pro နဲ့ Cinematography Pro အစရှိတဲ့ Software ပိုင်းဆိုင်ရာ Apps တွေလည်း ထည့်ပေးထားပါတယ်။
ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ 1 II Cameras တွေကို Software နဲ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထိန်းချုပ်လို့ ရလာစေမှာပါ။ Xperia 1 II အသေးစိတ်ကို ဒီဆောင်းပါး Link မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Display နဲ့ Camera တွေပြီးသွားရင် Follow-up လုပ်ထားတဲ့ နည်းပညာက 5G ပါ။ Snapdragon 865 SoC ၊ 8GB RAM နဲ့ 256GB UFS Storage ပါဝင်တဲ့ အဆိုပါ 1 II ဟာ Sub 6GHz Connection ထောက်ပံ့ထားပြီး mmWave ကတဆင့် Xperia Pro လို Device မျိုးနဲ့ 5G Connection ကတဆင့် ချိတ်ဆက်ထားနိုင်ပါသေးတယ်။
ဒီလို အသုံးပြုဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ Smartphone ရဲ့ View Finder ကနေတဆင့် 5G Connection ကို ရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်သလို Transmission နဲ့ Reception Speeds ကို မြင်နေရမယ်။
သို့ပေမယ့် 5G Model ကို ဥရောပမှာပဲ ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး US မှာတော့ 4G နဲ့ပဲ ရဦးမယ်လို့ Sony ပြောဆိုထားပါတယ်။
Xperia Pro မှာ Micro HDMI Cable ပါဝင်တဲ့အတွက် HDMI Port ကတဆင့် DSLR နဲ့ Professional Camcorders တွေမှာ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်သလို အထက်ပါ 5G ချိတ်ဆက်မှု Condition ကိုပါ ဖော်ပြပေးနိုင်မှာပါ။
ဆိုတော့ Xperai 1 II ဟာ ရေလည် လန်းမယ့် Device ဆိုပေမယ့် စာဖတ်သူတွေ မျှော်လင့်ထားတဲ့ စျေးနှုန်းနဲ့ ကိုက်ရဲ့လား? Sony က တရားဝင် ရောင်းချမယ့် စျေးနှုန်းနဲ့ Pre-order ကိုပါ ကြေညာထားလို့ ဘယ်လိုလဲ?
သူ့ထက် စျေးအများကြီး သက်သာတဲ့ Xperia 10 II လဲ ရှိနေသလို $389 နဲ့ ရောင်းချသွားမယ်လို့ သိထားရပါတယ်။
Xperia 10 II ရဲ့ ကင်မရာနမူနာနဲ့ စျေးနှုန်းအကြောင်း အသေးစိတ်ကို ဒီ Link မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
1 II အတွက် Sony ကြေညာလိုက်တဲ့ တန်ကြေးက $1,199 ပါ၊ ဇွန်လ ၁ ရက်ကနေ ၂၈ ရက်အတွင်း Pre-order မှာယူနိုင်ပါပြီ။ ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်မှာ စတင်ရောင်းချမှာဖြစ်ပြီး အကုန်လုံးကြိုက် နှင်းဆီခိုင် ဖြစ်လာမလား ဒါမှမဟုတ် ခွက်ပါပျောက်မလား စောင့်ကြည့်ရမယ် ထင်ပါတယ်။
တန်ဖိုးသင့် 5G Smartphones ဖြစ်လာတဲ့ Redmi 10X Series